Zvigadzirwa Vagadziri uye Suppliers - Wholesale Zvigadzirwa Suppliers
Black Vertical Firiji Girazi Door
YB Black Vertical Refrigerator Glass Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakanyungudutswa rakadzikama Low-E, iro rinopesana nekudhumhana, rinoputika-risingaputika nekuoma kwemhepo yemhepo yemotokari. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Black Vertical Refrigerator Glass Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃-10 ℃, iyo gasket ine simba remagineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Side Double Glazing yeCake Showcase
YB Side Double Glazing yeCake Showcase iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakakwidibira Low-E, rinodzivirira kudhumhana, risingaputse nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeye nani UV kuramba. YB Side Double Glazing yeCake Showcase inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva pa0 ℃-22 ℃.
Aluminium Alloy Frame Beverage Cooler Glass Door
YB Aluminium Alloy Frame Beverage Cooler Glass Door iri kushandisa girazi rinoyangarara rakakwidziridzwa rakadzikama Low-E girazi, rinopesana nekudhumhana, risingaputike nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Aluminium Alloy Frame Beverage Cooler Glass Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃-10 ℃, iyo gasket ine simba remagineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
YB Kitchen Cabinet Glass Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakakwidibira Low-E, iro rinopesana nekudhumhana, rinoputika-risingaputika nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Kitchen Cabinet Glass Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva 0 ℃-10 ℃, iyo gasket ine yakasimba magineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-rinoshanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Insulated Girazi ine LED Mwenje
YB Insulated Girazi ine LED Mwenje (inowanzo kunzi IGU kana IG) inoumbwa ne2 kana kupfuura zvimedu zvegirazi, yakaparadzaniswa nedesiccant yakazadzwa spacer bar uye yakavharirwa hermitically kumativi kuti iite imwechete unit. YB Insulated Girazi ine Chiedza che LED iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakanyungudutswa rakadzikama Low-E, iro rinopesana nekudhumhana, rinoputika-risingaputike nekuoma kwemhepo yemotokari. Iyo hermetically yakavharwa mweya (Argon, Krypton is Optional) nzvimbo inogadzira chipingamupinyi chekupisa uye kutamisa ruzha zvichiita kuti maIGU ashande zvakanyanya mukudzikisa kupisa kwemhepo-kumhepo kuwana kana kurasikirwa. Kana yakasanganiswa neLow-E kana inofungidzira coating, iyo insulating performance yeIGUs inovandudzwa zvakanyanya.
Coca Cola Logo Yakavhenekerwa Girazi
YB Coca Cola Logo Yakavhenekerwa Girazi (inowanzo kunzi IGU kana IG) inoumbwa ne2 kana kupfuura zvimedu zvegirazi, zvakaparadzaniswa nedesiccant yakazadzwa spacer bar uye yakavharirwa hermitically kumativi kuti iite imwechete unit. YB Coca Cola Mucherechedzo Wakavhenekerwa Girazi iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakayangarara rakadzikama Low-E, rinodzivirira kudhumhana, rinoputika-risingaputika nekuoma kwegirazi remhepo remotokari. Iyo hermetically yakavharwa mweya (Argon, Krypton is Optional) nzvimbo inogadzira chipingamupinyi chekupisa uye kutamisa ruzha zvichiita kuti maIGU ashande zvakanyanya mukudzikisa kupisa kwemhepo-kumhepo kuwana kana kurasikirwa. Kana yakasanganiswa neLow-E kana inofungidzira coating, iyo insulating performance yeIGUs inovandudzwa zvakanyanya.
Silver Frame Yakarurama Freezer Girazi Door
YB Silver Frame Yakarurama Freezer Girazi Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakanyungudutswa rakadzikama Low-E, rinodzivirira kudhumhana, rinoputika-risingaputika nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Silver Frame Yakarurama Freezer Girazi Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃-10 ℃, iyo gasket ine simba remagineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
YB White Tempered Decoration Girazi girazi rinoomeswa nekupisa. Yakave yakagadziriswa kupisa kupisa kuti iwedzere simba rayo uye kurwisana nemigumisiro. Inoshingirira kuputsika pane yakajairika girazi rekuyangarara. Uye kana ikatyoka, kazhinji kacho inotsemuka kuita twunhu twudiki, izvo kashoma kukonzeresa kukuvara kwakanyanya. The tempered girazi rinoshandiswa zvivako, kuratidza midziyo, mafiriji, mikova uye mahwindo, etc. Yedu yepamusoro toughened girazi iro rakagadzirwa giredhi yepamusoro annealed girazi, anogona sandara kana curved sezvinodiwa. Ukobvu kubva pa3mm kusvika 19mm, min size ye100 x 300mm, max size ye3000 x 12000mm. Chero ruvara kana pateni dhizaini zvakare inogona kugadzirwa.
YB Silk Screen Printing Tempered Glass girazi rinopisa rakaomeswa nekuchengetedza. Yakave yakagadziriswa kupisa kupisa kuti iwedzere simba rayo uye kurwisana nemigumisiro. Inoshingirira kuputsika pane yakajairika girazi rekuyangarara. Uye kana ikatyoka, kazhinji kacho inotsemuka kuita twunhu twudiki, izvo kashoma kukonzeresa kukuvara kwakanyanya. The tempered girazi rinoshandiswa zvivako, kuratidza midziyo, mafiriji, mikova uye mahwindo, etc. Yedu yepamusoro toughened girazi iro rakagadzirwa giredhi yepamusoro annealed girazi, anogona sandara kana curved sezvinodiwa. Ukobvu kubva pa3mm kusvika 19mm, min size ye100 x 300mm, max size ye3000 x 12000mm. Chero ruvara kana pateni dhizaini zvakare inogona kugadzirwa.
YB Tempered Glass igirazi rekuchengetedza rinopisa. Yakave yakagadziriswa kupisa kupisa kuti iwedzere simba rayo uye kurwisana nemigumisiro. Inoshingirira kuputsika pane yakajairika girazi rekuyangarara. Uye kana ikatyoka, kazhinji kacho inotsemuka kuita twunhu twudiki, izvo kashoma kukonzeresa kukuvara kwakanyanya. Girazi rinodziya rinoshandiswa pazvivakwa, midziyo yekuratidzira, mafiriji, magonhi nemahwindo, nezvimwewo. Girazi redu remhando yepamusoro rakaomeswa iro rakagadzirwa negiredhi girazi remhando yepamusoro, rinogona kuve rakati sandara kana kukombamira sekuda. Ukobvu kubva pa3mm kusvika 19mm, min size ye100 x 300mm, max size ye3000 x 12000mm. Chero ruvara kana pateni dhizaini zvakare inogona kugadzirwa.
Yakananga Freezer Girazi Door ine Recessed Handle
YB Upright Freezer Glass Door ine Recessed Handle iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakanyungudutswa rakadzikama Low-E, iro rinopesana nekudhumhana, rinoputika-risingaputika nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Yakarurama Freezer Girazi Door ine Recessed Handle inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃-10 ℃, iyo gasket ine simba remagineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Chest Freezer Glass Door ine Aluminium Handle
YB Chest Freezer Glass Door ine Aluminium Handle iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC. Sraidhi kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.